Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Gumiguru 09, 2017
Vanhu vakawanda votaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota icho chiri kuparurwa zvine mutsindo mangwana vakawanda vachiti havasi kunyatsoziva kwavanofanirwa kuenda kunonyoresa kuvhota, zvikuru vanhu vari kumaruwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvine vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika zvoshushikana nemashoko ekuti havabvumirwe kuvhota munyika kana vasina kutora mhiko yekuti havasisineyi nekunyika dzakaberekerwa vabereki vavo, izvo nyanzvi dziri kuti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika.
Vari pamudyandigere vochema chema nehurongwa hutsva hwavari kushandisa pakutora mari dzavo dzepenjeni vachiti makadhi avari kushandisa kutora mari kumabhanga ari kubhadhariswa mutero, izvo zviri kuita kuti vasare vaine mari shoma.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, votarisirwa kuvandudza dare ravo remakurukota panguva iyo makakatanwa muZanu PF ari kuenderera mberi.
Makurukota ezvemari muAfrica osangana pamusangano wezuva rimwe chete muWashington DC
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa kunetsana kuri kuitika muZanu PF uko kwasiya VaMugabe vakatarisirwa kuvandudza dare remakurukota kuitira kuti vaedze kupedza makakatangwa.